Aha nke rose: Umberto Eco's masterpiece | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Aha nke rose (1980) bụ ọrụ na-edu ndị Italian Umberto Eco nụrụ ụtọ na-Honeys nke edemede nke ọma. Ma ọ bụghị maka obere, taa, ọrụ a erewo ihe karịrị nde 50. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nwere ihe omimi miri emi nke atụmatụ ya gbara gburugburu nyocha nke ọtụtụ mpụ enigmatic nke mere n'oge narị afọ nke XNUMX na ebe obibi ndị mọnk ndị Italy.
N'oge na-adịghị anya a tọhapụrụ ya n'ihu ọha, ederede natara onyinye abuo di nkpa: onyinye Amoosu (1981) na Ọdịmma ndị ọbịa (1982). Mgbe afọ ise gachara - mmetụta nke ọrụ ahụ kpaliri - Eco bipụtara: Apostille ka Aha nke rose (1985). Site na oru a, onye ode akwukwo choro ịza ufodu ihe amaghi ama nke edeputara n'akwukwo akwukwo ya, ma ghara ikpughe enigmas di n'ime ya.
1 Nkọwa nke Aha nke Rose
2 Nnyocha nke Aha Rose
2.2 Ndị isi odide
2.2.1 William nke Baskerville
2.2.2 Melk si Adso
2.2.3 George nke Burgos
2.2.4 Eme ihe nkiri
2.3 Mgbanwe ederede
2.4 Eziokwu dị omimi
3 Banyere onye edemede, Umberto Eco
3.1 Ọmụmụ ihe na ahụmịhe ọrụ mbụ
3.2 Egwuregwu edemede
3.4 Akwụkwọ akụkọ ndị ode akwụkwọ
Nkọwa nke Aha nke rose
N'oge oyi nke 1327, ndị Franciscan Guillermo de Baskerville na-eme njem onye na-eso ụzọ ya Melk adso maka ijide otu kansụl. Ebe aga: ebe obibi ndi mọnk nke Benedictine na north Italy. Mgbe ha rutere, ha na-ahazi nzukọ ndị mọnk na ndị nnọchi anya nke Pope John XXII. Ebumnobi: kwurị okwu ikpe nrụrụ aka (nduhie) nke na-emebi nkwa nke ndịozi maka ịda ogbenye na nke - e chere na ọ bụ otu akụkụ nke ndị Franciscans na-akwalite ha.
Nzukọ ahụ wee gaa nke ọma, mana a na-ekpuchi ikuku site na ọnwụ mberede na nke dị omimi nke onye na-ese ihe bụ Adelmo da Otranto. A hụrụ nwoke ahụ nwụrụ anwụ n'ala ụlọ akwụkwọ abbey - ọmarịcha akwụkwọ mpempe akwụkwọ ndị jupụtara na akwụkwọ - mgbe ọ dagidere n'elu Aedificium Octagon. Mgbe eziokwu bilitere, Ọkpụkpụ —Abad nke temple- gwara Guillermo ka o mee nchọpụta banyere ya, ebe na-enyo na ọ bụ igbu ọchụ.
Ajụjụ ndị ahụ jụrụ ụbọchị asaa. N'oge ahụ, ọtụtụ ndị mọnk na-egosi na ha nwụrụ anwụ, ha niile nọ n'otu ọnọdụ: mkpịsị aka ha na ire ha na ink ojii. O doro anya na ọnwụ ndị ahụ metụtara akwụkwọ Aristotle dere nke kpachapụrụ anya metọọ akwụkwọ ya. N'oge nyocha ya, Guillermo agaghị agabiga ọtụtụ enigmas, kama ọ ga-ahụkwa ihu na ajọ ihe ọjọọ, nke a na-echekwa n'ụzọ zuru oke n'okpuru nkata nke agadi na amamihe na onyinyo onye ụkọchukwu ahụ kpuru ìsì Jorge de Burgos.
Aha rose ...
Nyocha nke Aha nke rose
Aha nke rose bụ akwụkwọ akụkọ ihe omimi dị omimi mere na 1327. Nkata a na-eme na ebe obibi ndị mọnk nke Benedictine dị na mgbago ugwu Italytali. Akụkọ ahụ gosipụtara karịa 7 isima nke ọ bụla n'ime ha bụ otu ụbọchị n'ime nchọpụta nke Guillermo na Adso novice. Nke ikpeazụ, n'ụzọ, bụ onye na-akọ banyere mmepe akụkọ ifo na onye mbụ.
Ndị isi odide
William nke Baskerville
Site na Bekee, ọ bụ friar onye Franciscan jere ozi dịka ụkọchukwu nke ụlọ ikpe Njụta Okwukwe. Ọ bụ nwoke nwere nkà, na-eleru anya na onye nwere ọgụgụ isi, nwere ọtụtụ ọrụ nchọpụta. Ọ ga-ahụ maka idozi ihe omimi na ọnwụ mberede nke ndị mọnk na abbey.
Aha ya sitere na Guillermo de Ockham, onye akụkọ ihe mere eme onye Eco chere na ọ ga-etinye dị ka onye protagonist site na mmalite. O sina dị, Ọtụtụ ndị nkatọ na-ekwu na akụkụ nke ụdị nyocha Baskerville sitere na akara ngosi Sherlock Holmes.
Melk si Adso
Nke sitere na - nwa nke Baron de Melk -, bụ onye na-akọ akụkọ ahụ. Iwu nke ezinụlọ ya, E debere William nke Baskerville na iwu ahụ, dịka onye odeakwụkwọ na onye na-eso ụzọ. N'ihi ya, ọ na-arụkọ ọrụ n'oge nyocha ahụ. N'oge mmepe nke ibé ahụ, ọ na-akọ akụkụ nke ahụmịhe ya dị ka Benedictine novice na ihe o biri site na njem ya na Guillermo de Baskerville.
George nke Burgos
Ọ bụ onye mọnk ochie nke sitere na Spanish nke ọnụnọ ya dị mkpa na mmepe nke nkata ahụ.. Site na physiognomy ya, Eco gosipụtara ịdị ọcha nke anụ ahụ ya na isi ìsì ya. Banyere ọrụ ya, agwa ahụ na-akpọte mmetụta dị iche na ndị ọzọ bi n'ụlọ obibi ndị mọnk ahụ: mmasị na ụjọ.
Ọ bụ ezie na agadi nwoke ahụ anaghị ahụ ụzọ ma ọ bụghịzi onye na-elekọta ọbá akwụkwọ ahụ, amaara oghere ya nke anụ ọhịa na inch na, na okwu ya nwere ekele ma were ya dị ka amụma site n’aka ndị mọnk ndị ọzọ. Maka okike nke onye a, onye edemede a sitere n'aka onye edemede a ma ama bụ Jorge Luis Borges.
Mgbe ọ bịara akụkọ ifo, enwere ike ịchọta ọtụtụ ezigbo mkpụrụedemede na ibé ahụ, onye kacha ha so n'okpukpe. N'ime ha bụ: Bertrando del Poggetto, Ubertino na Casale, Bernardo Gui na Adelmo da Otranto.
Afọ isii ka ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ akụkọ ahụ, Nke a bụ onye nduzi Jean-Jacques Annaud, butere nnukwu ihuenyo. Ihe nkiri nke otu aha ndị a ma ama bụ ndị na-eme ihe nkiri Sean Connery - dịka Friar William - na Christian Slater - dị ka Adso.
Dị ka akwụkwọ, Ihe nkiri ahụ nwetara ọhaneze nabatara ya nke ọma; na mgbakwunye, o nwetara ihe nrite 17 na asọmpi mba ụwa. Agbanyeghị, mgbe ebuputara ya, ndị nkatọ na ụlọ mgbasa ozi Italiantali kwuru okwu siri ike megide ihe nkiri ahụ, ebe ha chere na ọ bụghị n'akwụkwọ ahụ a ma ama.
Na 2019, emeputara usoro nke asatọ nke mere nke ọma nke a ga-asị na akwụkwọ akụkọ ahụ na ihe nkiri ahụ. Ọ bụ ọrụ Italian-German nke Giacomo Battiato mere; E kesara ya karịa mba 130 ma nweta ọtụtụ aha na Italy.
Eziokwu dị omimi
Onye dere akwukwo a bu akuko Le ihe odide nke Dom Adson de Melk, akwụkwọ ọ nwetara na 1968. A hụrụ ihe odide a n'ebe obibi ndị mọnk nke Melk (Austria) na onye kere ya binyere aka na ya dịka: "Abbe Vallet". Nke a gụnyere obere ihe akaebe akụkọ ihe mere eme nke oge ahụ. Ọzọkwa, onye ọ bụla dere ya kwenyesiri ike na ọ bụ ezigbo akwụkwọ nke akwụkwọ ahụ achọtara na narị afọ nke XNUMX na Melk Abbey.
Banyere onye edemede, Umberto Eco
Na Tuesday, Jenụwarị 5, 1932, obodo Italy nke Alessandria hụrụ ọmụmụ Umberto Echo Bisio. Ọ bụ nwa Giulio Eco - onye na - edekọ ego - na Giovanna Bisio. Mgbe ịmalite Agha Worldwa nke Abụọ, a kpọrọ nna ya ka ọ bụrụ onye agha. N'ihi nke a, nne kwagara nwa ahụ n’obodo Piedmont.
Ọmụmụ ihe na ahụmịhe ọrụ mbụ
Na 1954, o nwetara nzere doctorate na Philosophy na Akwụkwọ edemede na Mahadum Turin. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, Ana m arụ ọrụ na RAI dị ka onye na-edezi ọdịbendị ma malite ọrụ ya dị ka prọfesọ mahadum n'ụlọ nke ọmụmụ na Turin, Florence na Milan. N'oge ahụ, ọ zutere ndị na-ese ihe dị mkpa site na Gruppo 63, ndị ga - emesị metụta ọrụ ya dị ka onye edemede.
N'ihe banyere 1966, o kwupụtara oche nke nkwukọrịta anya n'obodo Florence. Afọ atọ mgbe e mesịrị, ọ bụ otu n'ime ndị guzobere International Association of Semiology. Ruo ihe karịrị afọ 30, ọ kụziri klasị semiotics na Mahadum Bologna. N'ebe ahụ, ọ guzobere Schoollọ Akwụkwọ Kasị Elu nke Ọmụmụ Ihe Ọmụma Maka Ọzụzụ Dị elu.
Na 1966, onye edemede eji akụkọ ole na ole akọwapụtara maka ụmụaka: Bọmbụ ahụ na General y Ndi cosmonauts ato. Afọ iri na anọ ka e mesịrị, ọ bipụtara akwụkwọ ọgụgụ nke dugara ya na stardom: Aha nke rose (1980). Ọzọkwa, onye edemede dere akwụkwọ isii, nke otu n'ime ha na-apụta: Ihe ejiji nke Foucault (1988) na Baudolino Queen Loana (2000).
Eco ọ gbarụkwa azụ, ụdị nke o gosipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 ọrụ n'ime afọ 60. N'ime akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ihe ndị a pụtara: Mepee ọrụ (1962), Apocalyptic na ike (1964), Onye a gọziri agọzi nke Liebana (1973), Na-eme ọgwụgwọ na usoro izugbe (1975), Nke abụọ kwa ụbọchị kacha nta (1992) na Mee onye iro (2013).
Umberto Eco lụrụ ọgụ ogologo oge megide ọrịa kansa. Nnọọ ọrịa ahụ metụtara, nwụrụ na Tuesday, February 19, 2016 n'obodo Milan.
Akwụkwọ akụkọ ndị ode akwụkwọ
Aha nke rose(1980)
Ihe ejiji nke Foucault(1988)
Agwaetiti nke ụbọchị gara aga(1994)
Ọkụ dị omimi nke Queen Loana(2004)
Ebe a na-eli ozu Prague(2010)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Aha nke rose